“Isika No Mahery Satria Misy ny Fitiavana” : Mahatsiaro an’i Víctor Jara i Amerika Latinina · Global Voices teny Malagasy
“Isika No Mahery Satria Misy ny Fitiavana” : Mahatsiaro an'i Víctor Jara i Amerika Latinina
Voadika ny 06 Jolay 2016 7:31 GMT
Fahatsiarovana an'i Víctor Jara tamin'ny septambra 2013. Saripika Flickr an'i Marcos G. (CC BY-NC 2.0).
Na dia efa 43 taona aza izay no nahafatesany dia mbola misy ihany ny miresaka momba an'i, Víctor Jara, Shiliana mpitendry mozika, mpihira sahady mpamoron-kira, talen'ny teatra ary mpikatroka politika ity. Tamin'ny 27 jona 2016, tao Florida tao Etazonia, dia nisy fitsarana nanambara fa tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'i Victor Jara ny miaramila teo aloha Pedro Barrientos. Izao didy izao no vokatry ny fitoriana eny amin'ny fitsarana napetraky ny vadin'i Jara sy ny zananivavy Manuela sy Amanda.
Tsy maintsy mandoa onitra mitentina 28 tapitrisa dolara amin'ny fianakavian'i Jara ihany koa i Barrientos, ary mety ampodiana eny an-tanindrazana, raha mihevitra ny governemantan'i Etazonia fa ilaina ny fanaovana izany. Mizaka zom-pirenen'i Etazonia tamin'ny alalan'ny mariazy i Barrientos.
Nosamborin'ny didy jadona miaramila vao tafapetraka tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 11 septambra 1973, nanaisotra ny governemantan'i Salvador Allende i Jara tamin'izany fotoana izany. Nampijaliana izy ary novonoina tao amin'ny kianja Chile taloha.
Tamin'ny 1990, nametraka mazava ny Vaomieran'ny Fahamarinana sy ny Fampihavanana fa rotiky ny bala miisa 44 tao amin'ny kianja Chile i Víctor Jara tamin'ny 16 septambra 1973. Natsipy tamin'ny tany foana iray ny fatiny, vao napetraka tsy fantatra anarana (NN) tao amin'ny tranom-paty. Avy eo izy fantatry ny vadiny britanika antsoina hoe Joan Turner.
Taona maro taty aoriana, tamin'ny taona 2012, namoaka fanenjehana ireo miaramila efa misotro ronono Hugo Sánchez Marmonti sy Pedro Barrientos Núñez tamin'ny famonoana an'ilay mpamoron-kira mpitondra faneva [mg], Atoa Miguel Vázquez Plaza, mpitsara ao amin'ny Fitsarana Ambonin'i Santiago. Namoaka didy fampisamborana iraisampirenena an'i Barrientos Núñez izay monina ao Etazonia ny mpitsara.
Naneho ny hafaliany ny ankohonan'i Jara tamin'ny fandrenesana izany fanapahan-kevitry ny fitsarana izany :
Nitomanin'ny hafaliana i Joan, vady navelany, sy ireo zananivavy Manuela Bunster et Amanda ary nanoroka ireo mpisolovava azy tamin'ny fandrenesana ny didim-pitsarana, raha nandray ny vaovao tamim-pahanginana sy tamim-piondrehana kosa i Barrientos. Mihevitra ny mpisolovavan'ny fianakavian'i Jara fa mety hanafaingana ny fampodian'ny governemantan'i Etazonia an'i Barrientos any Chile izao fanamelohana izao.
Naharitra fito andro teo anoloan'ny Fitsarana Federalin'i Orlando ao Florida ny fotoam-pitsarana.
Indreto ny fihetseham-po nangonina tao amin'ny Twitter :
Exmilitar golpista chileno condenado en EEUU por torturar y asesinar a Víctor Jara. https://t.co/OeY7SvWnylpic.twitter.com/EH017BREti
Miaramila shiliana taloha mpanongam-panjakana voaheloka tao Etazonia noho ny fampijaliana sy ny famonoana an'i Víctor Jara.
Miaramila shiliana taloha voaheloka 43 taona taorian'ny famonoana an'i Víctor Jara.
43 taona taty aoriana, nanameloka miaramila shiliana iray tamin'ny famonoana an'i Víctor Jara ny fitsarana.
Rehefa tapitra ny didy jadona dia nomena anarana Kianja Victor Jara ny kianja Chile.
Víctor Jara nandritra ny fiteteza-tany tao Però
Tamin'ny 17 jolay 1973, nandritra ny fiteteza-tany tao Però, nanaovan'i Ernesto García Calderon, Peroviana mpanolotra fandaharana sy mpanentana, rain'ny mpanoratra ity lahatsoratra [amin'ny teny espaniola] ity i Víctor Jara. Azo jerena ao amin'ny YouTube izany resadresaka izany :
Teo amin'ny teny fampidirana ny mpanolotra nampahatsiahy an'i Victor Jara mihira “ilay mpiasa eny an-tsaha, ilay mpiasa madinika, ilay mpitrandraka, ny ranomasina”, nefa mihira ihany koa ny fitiavana sy ny fandriampahalemana. Tamin'ny fanombohany, nitantara i Jara fa nahita gitara hatrany tao an-tranony satria mpihira ny reniny. Mihira ny reniny rehefa misy batisa (batemy), mariazy ary fandevenana, hiran'ny any ambanivohitra.
“Isika no tsara indrindra satria misy ny fitiavana, kitro ifaharana izany, iankinan'ny ain-dehibe, izay no antom-pisiantsika”, hoy i Jara nandritra ny dinidinika.
Niteny ihany koa ilay mpihira fa nanam-bitana tokoa izy nihaona tamin'i Violeta Parra, Shiliana mpihira sady mpamoron-kira heverina ho iray amin'ireo mpihira vokatry ny tany malaza ao Amerika, ary misy aza no mihevitra fa zananilahy izy.
Nolazainy ihany koa ny nantsoina ho hira vaovao shiliana tamin'izany fotoana izany, hetsika izay ny hiran'i Violeta Parra milaza ny fahamarinana sy ny tena izy tamin'ny kapila iray no nahatonga izany, kapila nanana fiantraikany lalina dia lalina ka nahatonga ny sasany hihevitra fa izay no lalana tokony arahina. Any amin'ny farany i Jara miresaka fa nanome feo ny tononkalo sasany izy, toy ny “El niño yuntero“, avy amin'ny poeta espaniola Miguel Hernández.